အသက် ၁၀ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့‌တုန်းက ရရှိခဲ့တဲ့ လက်ပတ်နာရီလေးကြောင့် ဘ၀ပြောင်းလဲသွားသူ - Myanmarload
06-Dec-2021 3pm ·2months ago
သူ့ဆယ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ လက်ဆောင်အဖြစ် နာရီတစ်လုံး ရခဲ့ပါတယ်။ နာရီထူးခြားချက်မှာ အချိန်‌ေနာက်ပြန်ရေတွက်တာကလွဲလို့ အခြားကဏ္ဍတိုင်းတွင် ရိုးရိုးမီးခိုးရောင် ပလတ်စတစ်လက်ပတ်နာရီတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ "ဒါက မင်းကမ္ဘာမှာကျန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေပဲ၊ သား၊ အဲဒါကို ပညာရှိရှိသုံးပါ" ဆိုသလို အမှန်ပင် သူအဖေပြောသလို နေခဲ့ပါတယ်။ လက်ပတ်နာရီကို အမှတ်အသားပြုပြီး ကောင်လေးကနေ ယောက်ျားတစ်ယောက်အဖြစ် နေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ တောင်များကိုတက်ကာ သမုဒ္ဒရာများကို လည်း ကူးခတ်ခဲ့တယ်။ သူဟာ စကားပြော ရယ်မောပြီး ချစ်ခင်စွာ နေထိုင်ခဲ့တယ်။ အချိန်မည်မျှကျန်‌ေသးသည်ကို အတိအကျသိ‌ေနတာ ကြောင့် သူဟာ ဘယ်သော်အခါမှ မကြောက်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတွင် နာရီဟာ သူရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရေတွက်မှုကို စတင်ခဲ့ပါပြီ။ အဘိုးအိုက သူလုပ်ခဲ့ဖူးသမျှကို ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။
5. သူဟာ သူရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းလည်းဟုတ်သလို လူယုံတော်ဟောင်းလည်း ဟုတ်သူနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်။ 4. သူ့ခွေးက လာလာပြီး သူ့လက်ကို နမ်းလိုက်ပြီး သူလည်း သူ့အဖော်အတွက် ခေါင်းကို ပုတ်‌ေပးလိုက်တယ်။ 3. သူဟာ ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း သိလျက် သားကို ပွေ့ဖက်ခဲ့တယ်။ 2. သူ့မိန်းမ နဖူးကို နောက်ဆုံးအကြိမ် နမ်းလိုက်တယ်။ 1. အဘိုးအိုက ပြုံးပြီး မျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်တယ်။
နောက်တော့ ဘာမှမဖြစ်လာပါဘူး။ နာရီဟာ တစ်ကြိမ် အသံမြည်ပြီး ပိတ်သွားပါတယ်။ သူလည်း မတ်တပ်ရပ်ပြီ အသက်ရှင်နေပါ‌ေသးတယ်။ အဲဒီအခိုက်အတန့်မှာ သူ အရမ်းပျော်သွားလိမ့်မယ်လို့ သင်ထင်‌ေနပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့အစား သူ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ် အဲဒီလူက ကြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို အချိန်တွေက အစကနေပြန်စခဲ့တာမို့ပါပဲ။